राजनीतिमा अपराधीको प्रभाव
Friday, 23 September 2011 12:12	दीपेश केसी
आपराधिक गतिविधिमा नाम जोडिएकाहरू सत्ता र शक्तिधारीका पछाडि झुम्मिनु नेपाली राजनीतिको स्वाभाविक चरित्र भइसकेको छ। नयाँ अपराधी समूह खडा गर्नेहरू राजनीतिक संरक्षणमा सशक्त बन्दै गएका छन्। लोकतन्त्र स्थापनापछि राज्यको पुर्नसंरचना सुस्त रहेपनि अपराधी सञ्जालको संरचना तीव्र भएको छ।
राजनेता र सर्वहाराको भूमिका
Friday, 23 September 2011 12:02	प्रदीप गिरी
गत साता (भदौ ३० गते) नागरिक दैनिकमा एनेकपा (माओवादी)को एउटा सभाको सानो समाचार छापिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले सभालाई सँगै सम्बोधन गरेका रहेछन्। सभामा मोहन वैद्यले प्रचण्डलाई राजनेता बन्ने प्रलोभनबाट जोगिने सल्लाह दिएका थिए। प्रचण्डले राजनेता बन्दा सर्वहारा वर्गको वर्गीय हित हुँदैन भन्ने मोहन वैद्यको कथन थियो।
फ्रिक्वेन्सीमा लेखाको अलमल
Friday, 23 September 2011 11:58	रामचन्द्र भट्ट
गत साता सार्वजनिक लेखा समितिमा युरोपेली कम्पनी टेलिया सोनेराका एक उच्च अधिकारीले गुनासो गरे, 'नेपालमा नयाँ प्रविधि सुरु गर्न खोज्दा समयअनुकूल नीति र सहयोग भएन।' टेलिया सोनेराको लगानी निजी क्षेत्रको मोबाइल कम्पनी एनसेलमा छ। एनसेलले दुई वर्षअघि फोरजी भनेर चिनिने एलटीई सेवा सुरु गर्न प्रस्ताव गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो। यसको सम्बोधन अहिलेसम्म भएको छैन।
Friday, 23 September 2011 11:40	खगेन्द्र दाहाल
एमबिबिएस सकेर नेपालमै बस्छु भन्ने साथीले केही दिनअघि फेसबुकमा लेख्यो, 'म पनि अमेरिका आउने भएँ यार!' 'के भयो?' भन्ने प्रश्नमा उसको जवाफ थियो, 'नेपालमा डाक्टर भएर काम गर्न गाह्रो छ साथी!'
हो भनिनँ, न होइन नै भनेँ, केही घटना सम्झेर।
जातीय राज्य : पान्डोराको बाकस
Thursday, 22 September 2011 12:26	मित्र परियार
विश्वको कान्छो गणतन्त्र नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत नहोला तर यसलाई कसरी सुव्यवस्थित गर्ने विषयमा भने फरक धारणाहरू आएका छन्। कछुवा गतिमा लम्किएको शान्ति प्रवि्र्कयाको हलो यसमा पनि अड्केको हुनाले यस विषयमा संविधानसभाभित्र र बाहिर व्यापक छलफल हुनुपर्थ्यो तर हुनसकेको छैन।
छिमेकीले सिकाएका पाठ
Thursday, 22 September 2011 12:24	डा. भारत रावत
नेपाललाई असाध्यै माया गर्ने जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री रियोतारो हासिमोतोसित झन्डै डेढ दशकअघि काठमाडौं विमानस्थलमा पत्रकारले सोधेका थिए - 'दोस्रो विश्वयुद्धमा पूरै ध्वस्त जापानले त्यति छोटो समयमै विकास गर्न सक्नुको रहस्य के हो?' उनले जबाफमा उनले भनेका थिए- 'शिक्षा।' हासिमोतोको त्यो छोटो उत्तरमा जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि गरेको सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक उन्नतिको रहस्य व्यक्त भएको थियो।
Thursday, 22 September 2011 12:22	विश्वमणि पोखरेल
एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ज्यापु समाजको १८ औँ वार्षिक साधारणसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई बार्गेनिङ गरिरहेको आक्षेप लगाए। आफूसँगै अतिथिको रूपमा आसीन कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई इंगित गर्दै दाहालले दुई पार्टी मिलेर माओवादीसँग बार्गेनिङ गरिरहेको र माओवादीलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा लागेकाले समस्या सुल्झन नसकेको दाबी गरे।
न्यायाधीश हुने कि मालिक?
Thursday, 22 September 2011 12:20	रघुनाथ लामिछाने
चन्द्रशमशेरले विक्रम संवत् १९८२ मा कमाराकमारी राख्न प्रतिबन्ध लगाए। अनि ६० हजारलाई तत्कालै मुक्त पनि गराए। दास अर्थात् नोकरका रुपमा राखिएका कमाराकमारी मुक्त भए भनिए पनि त्यसले रुप परिवर्तन गर्‍यो। अनि सरकारले फेरि २०५७ साउनमा त्यस्तै एक रुपको कमैया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो।
काम गर्न दिनोस्!
Wednesday, 21 September 2011 16:02	डा. मृगेन्द्रराज पाण्डे
आफ्नो तारिफ सुन्दा फुरुङ्ग पर्ने मानवीय स्वभावै हो तर कामको चटारोले पो हो कि त्यसमा ध्यानै गएन। प्रशंसाको साटो सल्लाहसुझाव पाएको भए बरु काममा सहयोग पुग्नेथियो।
Wednesday, 21 September 2011 16:00	प्रकाशचन्द्र लोहनी
माओवादीले भनेको प्रजातान्त्रिक मूलधार एकदलीय अधिनायकवाद होइन भन्ने मान्यता सबैलाई विश्वास हुने गरी व्यवहारमा उतार्नु प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मुख्य चुनौती हो। संविधान निर्माण त्यसैमा अडिएको छ।
Tuesday, 20 September 2011 12:35	सम्पादकीय
आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोपलाई टार्ने प्रविधि र ज्ञानको विकास हुनसकेको छैन। भुइँचालोजस्तो विपत्तिको त निश्चित पूर्वानुमान गर्न पनि सकिँदैन। तर, त्यस्ता विपत्ति आइपरेमा सामना गर्ने पूर्व तयारी गरियो भने जनधनको क्षति धेरै कम गराउन सकिन्छ। यही यथार्थ आत्मसात् गरेर संसारका धेरै मुलुकले आकस्मिक प्रकोपको अवस्थामा आइपर्ने समस्याको सामना गर्न पूर्वतयारी गरेका हुन्छन्।
सुरक्षित घर यसरी बनाउने
Tuesday, 20 September 2011 12:26	रामचन्द्र अधिकारी
नब्बे सालपछिकै सबैभन्दा ठूलो भुइँचालोले हामीलाई फेरि एकपटक थर्कमान बनाएको छ। सहरगाउँ जहाँसुकैका घर सुरक्षित हुनुपर्छ भनी हामी झस्किएका छौं। भुइँचालोलाई हामीले रोक्न छेक्न सक्दैनौं। आफू सुरक्षित बनेर यसबाट जोगिन मात्र सक्छौं। सरकारले दस वर्षअघि नै भवन संहिता (बिल्डिङ कोड) लागु गरेको थियो। त्यसमा अद्यावधिक गरी उपत्यकाका सबै र बाहिरका केही नगरपालिकाले पालना गरेका पनि छन्।
शान्ति प्रक्रिया र न्युयोर्क यात्रा
Monday, 19 September 2011 13:06	मनमोहन भट्टराई
प्रधानमन्त्री भएको २३ दिन पुग्दा बाबुराम भट्टराई संयुक्त राष्ट्रसंघको महाधिवेशनमा भाग लिन न्युयोर्कमा हुनुहुनेछ। पदमा बहाली गरेको ४५ दिनभित्रै मुलुकमा विद्यमान केही गम्भीर समस्या टुंगो लगाउने वाचासाथ देखिने नदेखिने अनेकौँ सन्धिसम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री पदमा पुगेका भट्टराईले न्युयोर्क प्रस्थानको पूर्वसन्ध्यामा संसद्मा दिनुभएको वक्तव्य र त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई भेटेर व्यक्त गर्नुभएका विचारका आधारमा उहाँले विश्व समुदाय सामु नेपालको राजनीतिको कस्तो चित्रण प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने आकलन सजिलै गर्नसकिन्छ।
हतियार होइन विचार निर्णायक
Monday, 19 September 2011 13:04	दिल साहनी
एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विशेष समितिलाई हतियार राखेको कन्टेनरको साँचो बुझाएकाले अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्ष आक्रोशित बनेको छ। त्यसको प्रतीकात्मक विरोधमा वैद्य पक्षले भदौ १६ गते एक घन्टा चक्काजाम गर्‍यो र मसाल जुलुस निकाल्यो। यसले माओवादीको एउटा धारलाई पार्टीले क्रान्तिकारी धार र आमूल परिवर्तनको बाटो छोडेको छैन भनेर उत्साहित बनाएको छ।
Sunday, 18 September 2011 13:27	चिरञ्जीवी नेपाल
सन् १९६६ तिर सिंगापुरमा राष्ट्रको आर्थिक रणनीति सम्बन्धमा ठुलो बहस भइरहेको थियो। राष्ट्रका सम्पूर्ण पेसा, वर्ग, जातिले आआफ्नै प्रकारका सुझाव र दबाब सरकारलाई दिइरहेका थिए। त्यही सालको मे १ तारिकका दिन सिंगापुरका तत्कालीन अर्थमन्त्रीले एउटा सभामा सबै क्षेत्रबाट उपस्थित व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गदै भनेका थिए- 'हाम्रो सिंगापुरको अहिलेको विकासको स्थिति कस्तो छ भने हामी धनी छैनौ, राष्ट्रलाई कल्याणकारी राज्य बनाउनसक्ने स्थिति छैन। तसर्थ, हाम्रो प्रथम कर्तव्य आर्थिक विकासबाट देशमा सम्पत्ति जम्मा गर्ने हो। भएको सम्पत्तिलाई समान वितरण गर्ने र कल्याणकारी सेवामात्रै बढाउदै लैजाने होइन।' उनको यो भनाइ हाम्रालागि अहिले पनि सार्न्दभिक छ।
Sunday, 18 September 2011 13:23	विष्णु निष्ठुरी
महोत्तरी, बनौलीका दुई महिला र एक युवक भ्रष्टाचारविरुद्ध अनशनमा उत्रिएका छन्। गाउँ विकास समितिमा गएको विकास बजेट दुरुपयोग भएको उनीहरूको दावी छ। त्यस दुरुपयोगविरुद्ध गरिएका सबै प्रयत्न खेर गएको निष्कर्षमा पुगेपछि उनीहरूले अनशनका माध्यमबाट दवाव सिर्जना गर्न चाहेका हुन्।
नेपाली विज्ञापन किन यस्तो?
Sunday, 18 September 2011 13:21	अभय पाण्डे
नेपाली विज्ञापन किन यस्तो? यो धेरैले गर्ने प्रश्न हो। अपवादबाहेक अधिकांश नेपाली विज्ञापन दोस्रो पटक हेर्न लायक हुँदैनन्। विज्ञापन क्षेत्रमा स्तरीय जनशक्तिको प्रवेश हुने क्रमले आशावादी हुने ठाउँ भए पनि धेरै उत्साहित हुनु जरुरी छैन।
उपेक्षित उपभोक्ता हित
Sunday, 18 September 2011 13:19	यमुना अर्याल
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई 'उपभोक्ता' भनिएको छ। उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने वस्तु वा पदार्थ 'उपभोग्य वस्तु' हो यस्ले उपभोग्य वस्तुको निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, रङ, सुगन्ध वा रसायनलाई समेत बताउँछ।
प्रधानमन्त्री @ जिओभी
Sunday, 18 September 2011 13:18	खगेन्द्र दाहाल
भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि अरूले पनि गर्नसक्ने तर सम्भवत गर्न नसकेका र नचाहेका धेरै काम भइरहेका छन्, जसका लागि उनी धन्यवादका हकदार बनेका छन्। केही दिनअघि उनले इमेल ठेगाना सार्वजनिक गरे, लगत्तै हजारभन्दा बढी पत्र प्राप्त भइसकेको समाचार छापामा आयो।
Friday, 16 September 2011 12:17	पूर्णकान्त अधिकारी
विसं २०६३ सालको प्रसंग हो। जंगलबाट भर्खर बाहिर निस्केका बावुराम भट्टराईसँग भेट हुँदा मैले सोधेको थिएँ - 'डा. साब! अस्ति नेपाल टेलिभिजनमा तपाईँको अन्तर्वार्ता निकै चाख मानेर सुरुदेखि अन्तिमसर्म्म हेरेँ, मलाई लागेको कुरा भनौ?' उहाँको उत्तर थियो 'भन्नु न त!'।
साँचो हस्तान्तरण कि आत्मसमर्पण ?
Friday, 16 September 2011 12:14	सन्तोषकुमार बुढामगर
'जनमुक्ति' सेनाको क्यान्टोनमेन्टको कन्टेनरको साँचो २०६८ भाद्र १५ गते विशेष समितिलाई बुझाएपछि एनेकपा (माओवादी)सँग अब सेना रहेन। 'जनमुक्ति' सेनासँग हतियार रहेन। जनतासँग अब कुनै चीज रहेन। जनयुद्ध अब इतिहासको एउटा घटनाक्रम मात्र बन्न पुगेको छ। यो वीरताको इतिहास त बनेको छ तर असफल क्रान्तिमा परिणत भएको छ। सेना बुझाएपछि 'जनयद्ध'को प्रक्रियाको समापन हुनेछ। जनयुद्धका उपलब्धिमध्य 'जनमुक्ति' सेनामात्र बचेको थियो। 'जनमुक्ति'सेना हालसम्म क्यान्टोन्मेन्टमा क्रान्तिको अन्तिम सपना साँचेर बसेको थियो।